New York waxay sharciyeysaa xashiishadda • Dawooyinka Inc.eu
New York waxay sharciyeysaa xashiishadda
Deganayaasha ka weyn 21 hadda waxay iibsan karaan illaa 3 wiqiyadood oo weed ah waxayna kori karaan illaa lix dhir oo shaqsi ahaan loogu adeegsan karo kan cusub heshiis cagaaran.
Sharci-dajiyayaasha New York iyo Guddoomiyaha Andrew Cuomo waxay gaareen heshiis lagu sharciyeeynayo marijuana-ga madadaalada, taasoo albaabka u fureysa warshad balaayiin doolar ku taal gobolka. Dhowr warbaahin ayaa durbaba soo sheegaya in Sharciga Cannabis loo qorsheeyay in la meel mariyo usbuuca soo socda iyadoo qayb ka ah miisaaniyada gobolka ee la bixinayo 1da Abriil.
"Ugu dambeyntiina waxaan awoodi doonnaa inaan dhahno waxaan leenahay warshad xashiish ah oo dadku ka iibsadaan wax soo saar sharci ah shirkadaha sharciga ah," ayay tiri Senator Liz Krueger. Dimuqraadi hogaaminaya wadahadalada ayaa raaca Times. Sharciga cusub, oo lagu dhaqi lahaa dadka degan New York ka weyn da'da 21 ayaa sharci ka dhigeysa in la iibsado lana haysto ilaa 3 wiqiyadood, oo qiyaastii ah 85 garaam, oo marijuana ah oo loogu talagalay shaqsi ahaan.
1 Takoorida iyo daba galka xashiishadda
2 Canshuurta xashiishka
Takoorida iyo daba galka xashiishadda
Saraakiisha ayaa rajeynaya in tani ay soo afjari doonto sanado badan oo rabshado ay wadeen booliska oo dadka madow iyo Hisbaanikku ay aad ugu dhowdahay in loo xiro marijuana haysashada iyo adeegsiga marka loo eego kuwa cadaanka ah. Heshiiska gorgortanka ah ayaa lagu soo waramayaa inuu abuuri doono Xafiis cusub oo Maareynta Cannabis ah iyo Guddi Xakamaynta Xashiishadda si ay u kormeeraan madadaalada madadaalada iyo warshadaha marijuana iyo hemp la xidhiidha CBDwarshadaha.
Ruqsadaha cusub ee gobolka ee xashiishadda ayaa loo abuuray beeralayda, qeybiyeyaasha, soo saarayaasha wax soo saarka, goobaha lagu iibiyo iyo goobaha tafaariiqda, iyadoo la abuurayo goobo sharci ah oo lagu cuno marijuana Waxa kale oo jiri doona sharciyo xukumaya, tusaale ahaan, wadista baabuurka iyadoo la sakhraansan yahay xashiishadda iyo ciqaab taxane ah oo cusub oo ku saabsan haysashada iyo iibinta xashiishadda sharci darrada ah.
Magaalooyinku waxay haystaan ​​illaa dhammaadka 2021-ka inay ka waantoobaan inay yeeshaan maqaaxiyo iyo dukaamo lagu iibiyo xashiishka. Kharashaadka Marijuana waxaa saameyn ku yeelan doona canshuuro kala duwan, iyada oo la sheegayo in qeybiyeyaasha ay ku bixinayaan halkii milligram ubaxyo, uruurin iyo edibles. Dukaanleyda waxay bixiyaan boqolkiiba sagaal canshuurta gobolka iyo 4 boqolkiiba canshuurta maxalliga ah.
Dakhliga gobolka ee ay keeneen canshuuraha cusub, boqolkiiba 40 waxay aadi doonaan sanduuq cusub oo loogu talagalay barnaamijyada sinnaanta bulshada iyo dhaqaalaha. Boqolkiiba 40 kale waxay aadi doonaan sanduuqa waxbarashada ee gobolka. Boqolkiiba 20 kale waxay noqon doonaan daaweyn, ka hortag iyo barnaamijyo waxbarasho.
Canshuurta gobolka ee 9 boqolkiiba iibinta tafaariiqda waxay soo saari kartaa $ 300 milyan sanadkii dakhli cusub.
Akhri wax dheeraad ah independent.co.uk (Source, EN)
Daawooyinka fentanyl-wasakheysan ayaa laga helay Ameerika
Fentanyl waa daroogo awood badan oo si weyn loogu isticmaalo America. Sida laga soo xigtay Machadka Qaranka ee ...
Ka waran warshadaha cannabis inta lagu gudajiray qalalaasaha corona ee Kanada?
Iyada oo inta badan Kanada ay ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah, dawladaha gobollada ayaa lagu qasbay in ay doortaan ...
Sidee sharciyeynta daroogada Portugal?
Sagaashameeyadii, Boortaqiiska waxaa halakeeyay dhibaato daroogo oo 100 kii qofba ...